AKHRISO:-Puntland oo dhaqdhaqaayo ciidan ka wada deegaano ka tirsan gobalka Sanaag | Saadaal Media
AKHRISO:-Puntland oo dhaqdhaqaayo ciidan ka wada deegaano ka tirsan gobalka Sanaag
Wararka aan ka helayno Degmada Hadaaftimo oo ka tirasan gobalka sanaag waxay sheegayaan in halkaas ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo u dhaxeeya Puntland Iyo Maamulka Soomaliland .
Qaar kamid ah dadka deegankasi ayaa warbaahinta u sheegay in dadka ay soo wajahday Cabsi weyn oo laga qabo dagaal toos ah oo ka dhex qarxa labada dhinac, gaar ahaana dhaqdhaqaaqyada hadda ka socda gobalka Sanaag oo ay suuragal tahay in ay dagaal isku bedelaan.
Ciidamo ka tirsan Maamulka gobalada woqooyi ee Soomaaliland ayaa doonaya inay Sanaadiiqda Doorashadda ay u soo hogaamiyaan, meel 30-KM u jirta degmada Badhan ee gobolka Sanaag sida sida dadka deegaanku u sheegeen warbaahinta
Dhinaca kale wafti uu hogamainayo Wasiirka Amniga ee Puntland Cabdullaahi Axmed Dawlad, ayaa gaaray degmada Badhan oo ka tirasan gobalka sanaag si ay uga hortagaan Sanadiiqada Doorashada ee Maamulka soomaliland.
Puntland iyo Soomaliland ayaa warbahainta isku marinaya hanjabaado kala duwan Illaa iyo hadda lama saadaalin karo halka ay saldhigan doonto xaaladan, waxaana ay xaaladu maraysaa Somaliland oo doonaysa inay sanaadiiq Doorasho keento Sool, Sanaag iyo Cayn iyo Puntland oo Difaac kaga jirta.
Si kastaba ha ahaate, arrimahan ayaa kuso beegmaya xilli maalinta bari gobolada Somaliland looga dareeri doono codeynta Doorashadda madaxtinimada Somaliland.